Iphupha lokudlula Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha ngokudlula. Sonke siyaphupha, kodwa uyazi ukuba kuthetha ntoni? Esi sikhokelo siza kukunceda utolike amaphupha.
Sizazisa ngencwadi yethu yokundwendwela. Oko kuthetha ukuba, ngoncedo lolu xwebhu, singabonisa ukuba singoobani kwaye sivelaphi. Ipaspoti iqulethe ulwazi malunga negama lethu, umhla wokuzalwa, ukuphakama, umbala wamehlo kunye nedilesi yethu yangoku njengokuzazisa.
Ipasipoti eqhelekileyo ihlala yanele kumazwe e-EU. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuhambela kude, kumazwe amaninzi ufuna ipasipoti apho ukungena nokuphuma kunokuqinisekiswa ngenqaku. Ukuba ulahlekelwe yipasipoti yakho, kwaye kwimeko embi kakhulu, uyibona kuphela kwisikhululo seenqwelomoya, ingxaki ihlala ilungile. Ezo kunye nezinye iimeko zokulala ezixhalabisayo ziyavela kubantu abaninzi ebusuku kwaye zibangele ukudideka.
Emva koko kuphakama imibuzo enje ngala: Lithetha ntoni kanye kanye uphawu lwephupha "ipasipoti"? Ngaba eli phupha lithetha nto ngobuntu bam? Okanye ngaba umfanekiso wephupha ubhekisa kuhambo lwasebukhosini olusondeleyo?
Phambi kokuba ujike kutoliko jikelele lophawu "lwepasipoti" ngokwendlela yekhadi lokuchonga, masiqale sijonge ezona ndawo zixhaphakileyo ngephupha:
1 Isimboli yephupha «Ukupasa» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Uhambo luqala: ukuhamba ephupheni kunye nepasipoti
1.1.1 Uxwebhu lokuhamba: ipaspoti ephupheni
1.1.2 Sebenzisa ipasipoti njengomkhweli kwilizwe lamaphupha.
1.2 Bona okanye uthathe ifoto yepasipoti kwilizwe lamaphupha
1.3 Ulibalekile okanye ulahlekile! Ipasipoti ilahlekile kumcimbi wephupha.
2 Uphawu lwephupha «ipasipoti» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «Ukupasa» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «Ukupasa» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «Ukupasa» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Uhambo luqala: ukuhamba ephupheni kunye nepasipoti
Uxwebhu lokuhamba: ipaspoti ephupheni
Ngokubanzi, ipasipoti ekubonakaliseni amaphupha ibonisa utshintsho. Olu tshintsho lwendawo luxhomekeke ekuhambeni okanye kuhambo lokwenyani. Umnqweno "wotshintsho lwembonakalo yelizwe" ngengqondo yotshintsho olusisiseko unokuchazwa ngalo mfanekiso wephupha.
Sebenzisa ipasipoti njengomkhweli kwilizwe lamaphupha.
Uhambo olulandelayo ephupheni, apho uziva ngathi ukhwele kwinqwelomoya, enqanaweni okanye kuloliwe, kufanekisela uhambo lwakho ebomini. Ukuba umntu usebenzisa ipaspoti ephupheni kwaye kufuneka ayibonise umhloli, enyanisweni umntu unokufumana ukucaca ngakumbi kumcimbi othile.
Bona okanye uthathe ifoto yepasipoti kwilizwe lamaphupha
Ngaba ubone isithombe sepaspoti ephupheni? Ukuba wawumelwe kuye, umfanekiso wephupha unokuqondwa njengesikhumbuzo sokuqonda ezakhe iimpazamo ngokunxulumene notshintsho lwendawo. Ukuba omnye umntu uboniswe kwifoto yepasipoti, uya kudibana nabantu abatsha.
Ulibalekile okanye ulahlekile! Ipasipoti ilahlekile kumcimbi wephupha.
Ukuphulukana noxwebhu olubalulekileyo kunokubonisa uloyiko lokwenene ngaphambi nje kohambo: Ngaba ndicinge ngayo yonke into? Ukuba umntu uyayiqonda ipasipoti njengophawu lokutshintsha indawo, ukulahlekelwa ngamaphepha akhe ephupheni kubonisa ukuba unakho Ndiyoyika olu tshintsho. Ekugqibeleni, oku kuhlala kubandakanya ukwahlulwa kwendalo kunye neepateni zosapho.
Uphawu lwephupha «ipasipoti» - ukutolikwa ngokubanzi
Umfanekiso wephupha "ipasipoti" kunokwenzeka ukuba utshintshe indawo okanye uhambo lweholide olulindelwe kubomi bokwenyani kwaye ke ngenxa yoko umntu uhlala kwimicimbi engekadingeki.
Nangona kunjalo, ngokuthetha ngokubanzi, incwadana yokundwendwela inokubonisa ifayile ye- ulahlekile, ibonisa ukuba umntu ophuphayo uyakuphulukana nelahleko kwisangqa esisondeleyo sabazana okanye nabahlobo. Ipaspoti njengomqondiso wephupha inokunceda umntu ochaphazelekayo ukuba acace ngakumbi kumcimbi othile ekudala ekhangela indlela yokuphuma ixesha elide.
Nangona kunjalo, ukuba ubona ipaspoti yomntu wasemzini, ungoyikiswa iingxaki kunye nolawulo loluntu okanye abasemagunyeni. Kananjalo ukhathalele izicwangciso zokuhamba zomnye umntu. Usenokude ube nexhala lokuba sele usendleleni kwaye usoyika ukuba kungenzeka ingozi kuwe.
Ukuba umisa emdeni kwaye simisiwe apho kuba awukwazi ukubonisa ipasipoti yakho, oku kuthetha ukuba umntu othile uhlala ebeka imiqobo endleleni yethu kwaye esenza ubomi bethu bube nzima ngakumbi.
Uphawu lwephupha «Ukupasa» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umntu ujonga uphawu lwephupha «ipasipoti» ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, umnqweno womntu ophuphayo ngamanye amaxesha unokuba ngasemva kwawo. Usenokucinga ngokuthatha ikhefu ngohlobo lokuhamba okanye lokuhamba. Kuyo kungakho isidingo esikhulu sokwalathisa ubomi bakho bonke kumacala amatsha. Oku kuthetha ukuyeka imikhwa yakudala, iinkolelo, kunye neembono kwaye uzikhulule ngokupheleleyo kwezi zinto zangaphakathi. Ukuba ukulungele kwaye uzimisele ukutshintsha, kungekudala uza kufumanisa ukuba uthathe isigqibo esifanelekileyo.
Ukongeza, ipasipoti yakho inokubonisa ukuba ukunye ukuzithemba okuphantsi. Kusenokwenzeka ukuba uziva unetyala. Kuya kufuneka ufike emazantsi ezi nkcukacha ngakumbi, kuba kulapho izizathu zokungazithembi kwakho ngoku kunokufunyanwa khona.
Uphawu lwephupha «Ukupasa» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha "ipasipoti" uquka ukutolikwa kwamaphupha okomoya: Ingqondo lomntu uphuphayo. Ukongeza, ipasipoti inokubonisa ubomi obupheleleyo.